शनिबार, २३ असोज २०७८, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाण्डौं । नेपालीहरुको महानपर्व बडादशैं, दिपावली, छठ,नेपाल सम्बत लगायतको पर्वहरुको अवसरमा नेपाली काँग्रेस शिवपुरी काठमाण्डौं सम्पर्क समाजले आज काठमाण्डौंमा सुभकामना आदनप्रदान तथा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा पुर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले एउटै पार्टी भित्र गुट बनाएर संघर्ष गर्दामा पार्टी कम्जोर भएको भन्दै एकता गरेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
एउटा पार्टी र अर्को पार्टीको बिच एउटा अन्तरसंघर्ष हुन सक्दछ । तर पार्टी भित्र पनि गुट बनाएर संघर्ष गर्ने होइन । एकता कायम गर्नुपर्दछ । नेता महतले भने “को उपयुक्त छ, विधिपुर्वक के छ ? त्यसैलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । आफ्नो मान्छेलाई जिताउनको लागि विधिमिचेर पनि धेरै जिल्लामा अधिवेशन भइरहेको छ । यस्ता कार्यले पार्टीलाई कम्जोर बनाँउदछ”
प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको इतिहाँसमानै सबै भन्दा बढी विधिलाई मिचेर काम गरिरहेको बताँउदै पार्टी अधिवेशनको नाममा बिकृति फैलाएको आरोप लगाउनुभयो ।
कार्यक्रममा पुर्व मन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले स्वाभीमानमा हमला हुने गरि सहमती गर्न नसकिने बताँउदै सहअस्थीत्वको आधारमा सहमतीको खोजी गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
पार्टीको अधिवेशनमा सहमती खोजीनु उत्तम उपाय हो, सहमती हामीले गरिरहेकापनि हौं गर्दछौं पनि । नेता केसीले भन्नुभयो “ सहमती भनेको सहअस्थीत्व हो, सहमती भनेको सर्मपण होइन् । सहमती भनेको कसैमा गएर सो अस्थीत्व बिहिन हुने होइन । त्यसमा दुवैको सम्मान कायम हुनुपर्दछ । तर जहाँनेर स्वाभीमानमा हमला हुन्छ । जहाँनेर कसैलाई अपमान गर्न खोजीन्छ त्यो अपमानको प्रतिबाद गर्नु मानिसको धर्म हो कर्तव्य हो । सबै भन्दा ठुलो कुरा भनेको सह अस्थीत्वको खोजीको कुरा हो ।”
नेता केसीले भन्नुभयो “सहमती भएन भने प्रतिष्पर्धा हुन सक्दछ । हामी प्रतिष्र्धी हुन सक्दछौं । प्रतिष्पर्धी हुनुको मतलब दुस्मन होइन, त्यसलाई दुस्मनीको रुपमा हेर्नुहुंदैन् । किन भने हामी एउटै लक्ष्य, एउटै उदेश्य, एउटै गन्तव्य बोकेर यात्रा प्रारम्भ गरिरहेका छौं । त्यो यात्राको हामी सबै साझा सहयात्री हौं ।”
पार्टी भित्र बाद, प्रतिबाद र सम्बाद भनेको राजनीतिक प्रकृया रहेको बताँउदै नेता केसीले पार्टी भित्र फरक बिचार राख्नेलाई निषेध गर्न नहुने बताउनुभयो ।
नेता केसीले भन्नुभयो “लोकतन्त्रमा बिचारको बिबिधता,सिद्धान्त र दृष्टीकोणमा मतभेद हुन्छन् । त्यसको मदभेदका बिचको अन्तीम सत्यलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ । हामीले जित्यौं होला, कतिपय ठाँउमा हार्यौपनी होला जित्नेले मात्तिनुपनी हुंदैन हार्नेले आँतिनुपनी हुंदैन किन भने हामीसबै एउटै लक्ष्य र उदेश्यको यात्रामा छौं”
नेता केसीले भन्नुभयो “एउटा बिचार त्यो बिचारलाई अर्कोले प्रतिबाद गर्दछ, त्यो ठिक छैन भन्छ । एउटा व्यक्ति आँउछ अर्को व्यक्तिले हैन त्यो भन्दा म बढता गर्न सक्दछु भन्छ । ति बिचको द्धन्द र घर्षणबाट सुन्दर सारंश निस्कीन्छ त्योनै उत्तम लोकतन्त्र हो ।”
कार्यक्रममा संविधान सभासदस्य एवं नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसीले लोकतन्त्र र आन्तरीक निष्ठाको निम्ती पार्टी भित्र लडनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
सभापति केसीले भन्नुभयो “ को संग पैसा छ, उ अगाडी बढने अवस्था देखियो । जो संग राजनीतिक संस्कार छैन, सिनियारीटीको कुरा छैन्, त्याग, तपस्या, जेल नेल केहि कुरा छैन्, आन्दोलनलको सहभागीताको बिषयनै छैन् अहिले सेतो कुर्तासुरुवाल लगाएर, पैसा भएर चिल्लो गाडी चढेर आएपछि उसैलाई नेता बनाउने अवस्था भयो ।”
पार्टीलाई जुझारु, सिनियर र बिचार बोकेको व्यक्तिको खाँचो रहेको बताँउदै सभापति केसीले नुवाकोट जिल्लामा त्यस्तो व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनको लागि आफु डा. रामशरण महत र बहादुर सिंह लामासंग एकै ठाँउमा बसेर कुरा गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो“ सहमती खोज्ने क्रममा त्यहाँ मध्यको सबैभन्दा बढी कृयाशील को, पार्टीको निम्ती कस्ले बढी योग्दान कस्ले गरेको छ, पार्टीका अन्य गतिविधिहरुमा उसको योग्दान कति छ ? यि सबै कुरालाई मुल्यांकन गरेर प्रदेश, क्षेत्र र जिल्लामा सहमती गर्न सकिछ । तर हामी को संग कहाँ के छ भनेर खोजी गर्न थाल्यौं त्यस्ले समस्या निम्त्याएको छ ।”
नेपाली काँग्रेस शिवपुरी काठमाण्डौं सम्पर्क समाजका अध्यक्ष मुकुन्द प्रसाद पाण्डेको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रजातान्त्रीक बिचार समाजका अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसी, नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका जिल्ला उपसभापति लक्ष्मण थापा, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख अप्सरा थापा, महासमिति सदस्य एवं शिवपुरी गाँउपालीकाकी उपाध्यक्ष मञ्जु केसी, नेपाली काँग्रस नुवाकोटका पुर्व उपसभापति बिसम रिमाल, नेपाली काँग्रेस शिवपुरीका सभापति कबिराज गुरुङ, नेपाली काँग्रसका युवा नेता सरोज केसी, नेपाली काँग्रेस तादी काठमाण्डौं सम्पर्क समितिका सभापति रामेश्वर अधिकारी, शिवपुरी गाँउपालीका ७ का वडा अध्यक्ष माधब भेटुवाल लगायतका नेताहरुले बडा दशैं, दिपावली, छठ लगायतको पर्वको अवसरमा सुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
मन्तव्य नेपाली काँग्रेस शिवपुरी काठमाण्डौं सम्पर्क समाजका बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रह्लाद थापा कार्यक्रममा सहभागीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा पार्टीका बिभिन्न तहहरुमा नवनिर्वचीत सभापतिहरु, पदाधीकारीहरु, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरु, बिभिन्न भातृसंस्था तथा सुभेच्छुक संस्थाका पदाधीकारीहरुको उपस्थीति रहेको थियो ।
कांग्रेस ताप्लेजुङ सभापतिमा गजेन्द्र विजयी
नेपाली काँग्रेस तारकेश्वर नगरसभापतिमा महर्जन बिजयी, पदाधीकारीमा भने दुवै समुहको बराबरी जित